धरानमा पशुचौपायलाई लाग्ने रोगबाट बचाउन निःशुल्क खोप अभियान - Everest Daily News
धरान । घरपालुवा पशुचौपायलाई लाग्ने रोगबाट बचाउन धरानमा निःशुल्क खोप दिन सुरु गरिएको छ । निःशुल्क खोप अभियान धरान ५ देउरालीबाट सुरुवात गरिएको हो । सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सर्तकता अपनाउन क्लासिकल स्वाईन फिभर, पि.पि.आर.र खोरेत रोगको विरुद्ध खोप दिन शुरु गरिएको शाखाको भनाई छ ।
आज (बुधबार) नगर प्रमुख तिलक राईले नगर स्तरीय निःशुल्क खोप सेवा कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्नु भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सहयोगमा तथा धरान उपमहानगरपालिका पशु सेवा शाखाको आयोजनामा निःशुल्क खोप दिन सुरु गरिएको हो । ‘पशुको संक्रमक रोकथाम र कृषकहरुको क्षति न्यूनिकरण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ बाख्रा र सुंगरलाई खोप दिन सुरु गरिएको पशु सेवा शाखाले जनाएको छ । बाख्रालाई निःशुल्क खोप (पीपीआर) लगाउन आजबाट नै सुरु गरिएको छ । वडामा चार जना प्राविधिक स्वंयमसेवक खटाइएको छ । उनीहरुलाई नगर प्रमुख राईले खोप तथा औषधी सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको छ ।
धरान उपमहानगर प्रमुख राईले पशु शाखाबाट प्रदान गरिदै आएको सेवाहरुको बारेमा किसानलाई सहि ढंगबाट सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन आग्रह गर्नुभयो । क्लासिकल स्वाईन फिभर, पि.पि.आर. र खोरेत रोगको विषयमा किसानलाई सही ढंगले जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खोपको बारेमा किसानलाई थाहाँ हुनुपर्छ ।’ खोप लगाएपछि किसानहरुले पुर्ण लाभ पाउनुपर्ने प्रमुख राईको भनाई थियो । ‘किसानको मनोविज्ञान पनि सकारात्मक हुनुपर्यो, हामिले खोप लगायौ है, यो खोप यस्तो र छ, यसको असर यस्तो र छ भनेर फाईदा बेफाईदा छुट्याउन सक्नुपर्यो’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले खोप लगाएर मात्र नहुने भन्दै खोप लगाईसकेपछि निरीक्षण तथा अनुगमण गर्न पनि पशु शाखालाई निर्देशन दिनुभयो ।
आर्थिक विकास महाशाखा अन्र्तगतका पशु सेवा शाखाका प्रमुख महेन्द्र कुमार पैकराले खोप अभियानमा आधिकारिक व्यक्ति खटाइएको बताउनुभयो । आगामी वर्षदेखि खोप तथा रोगको बारेमा किसानहरुलाई प्रचार प्रसार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘टोलटोलमा पुगेर खोपको बारेमा पर्चा वितरण गर्नेछौं, भोली गएर यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्दा नकरात्मक असर पार्दैन, कुन संस्थाबाट खोप आएको हो भनेर मानिसहरु जानकारी गराउने छौं ।’ प्राविधिकहरुलाई खोपको बारेमा कति दिनसम्म काम गर्छ ? कस्तो अवस्थामा दिने ? कस्तो अवस्थामा नदिने ? भनेर तालिम दिएको जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक घरघरमा गएर प्राविधिकहरुले किसानलाई जानकारी गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पशु सेवा शाखाका डाक्टर विर्ख बहादुर राईले धरानको पशुपालन बढी गरिने क्षेत्रलाई लक्षित गरी निःशुल्क खोप कार्यक्रम संचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । धरानको पशुपालन गरिने सबै क्षेत्रमा यो अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।